Daahfurka Tarjumaadda Sayniska - AfricArXiv
Published by Kooxda Tarjumaadda Sayniska on 6th May 2021 6th May 2021
Waan ku faraxsanahay inaan ka mid nahay Tarjun Saynis koox, oo ay weheliyaan xubno ka socda dhaqdhaqaaqa Sayniska Furan iyo Aqoontooda. Iskaashigan dhexdiisa, AfricArXiv waxay gacan ka geysan doontaa kobcinta kala duwanaanshaha luqadaha Afrika ee xiriirka cilmiyeed.
Ogeysiiskan waxaa markii hore lagu daabacay blog.translatescience.org/launch-of-translate-science/
Xubnaha kooxdu waxay leeyihiin sooyaal kala duwan iyo dhiirigelin. Dhaqtarka jirka Dasapta Irawan jeclaan lahaa saynisyahano inay awoodaan inay wax ku qoraan luuqada dadka ay u adeegayaan. Ben Trettel wuxuu ka shaqeeyaa burburka diyaarado biyo kacsan wuxuuna ka qoomameynayaa in aragti badan oo ka timid suugaanta qalalaasaha Ruushka la iska indhatiro. Victor Venema waxay ka shaqeysaa isbeddellada cimilada la arkay waxayna u baahan tahay macluumaad ku saabsan hababka cabbirka (taariikheed), ee lagu hayo luqadaha maxalliga ah; beertiisu waxay u baahan tahay inay fahamto saameynta cimilada meel kasta iyo xogta tayada leh ee ka socota dhammaan waddamada adduunka. Luke Okelo, Johanssen Obanda iyo Jo Havemann la shaqeynayaan AfrikArxiv - bogga furan ee Helitaanka Furan si ay u dhiirrigeliso wax soo saarka cilmi baarista Afrika. Waxay xiiseynayaan inay arkaan suugaanta sayniska ee afafka Afrika oo ka gudbaya caqabadaha daabacaadda cilmiga dhaqanka ee luuqadaha asaliga ah ay ka soo horjeedaan isla markaana ay dhowaan bilaabi doonaan dadaal iskaashi ah oo loogu turjumayo qoraallada cilmiga Afrika ee afafka kala duwan ee Afrika.
Koox ahaan ereyga "Suugaanta sayniska" wuxuu leeyahay noocyo kala duwan oo noocyo ah wuxuuna macnaheedu noqon karaa wax kasta oo ka soo baxa maqaallada, warbixinnada iyo buugaagta, soo koobista, cinwaannada, ereyada muhiimka ah iyo ereyada. Soo koobid afaf kale ah ayaa iyana waxtar leh.
Waxaan xiiseyneynaa howlo kala duwan oo naga caawinaya tarjumaadaha: bixinta macluumaadka, isku xirka, qaabeynta iyo dhismaha qalabka iyo u ololeynta aragtida tarjumaadaha oo ah wax soo saar cilmi baaris oo qiimo leh.
Waxaan leenahay balooggan, noo Wiki, our liiska qaybinta iyo a koontada micro-blogging wadahadal ku saabsan waxa aan sameyn karno si aan kor ugu qaadno tarjumaadaha iyo bixinta macluumaadka ku saabsan sida loo sameeyo tarjumaadaha loona helo kuwii horey u jiray.
Qalabyo kala duwan (iyo bulshooyinka adeegsanaya) ayaa gacan ka geysan kara helitaanka iyo soo saarista tarjumaadaha. Macluumaad ay kujiraan maqaallo la tarjumay ayaa ka dhigi kara kuwo la heli karo Diiwaankan waa inuu buuxiyaa dadka iyo hay'adaha turjumaada sameeyay, iyo sidoo kale keydka macluumaadka hore iyo maqaallada joornaalada turjumaada (laga soo bilaabo xilligii Dagaalkii Qaboobaa). Iyada oo ku-habboonaanta (API-yada) maareeyayaasha tixraaca, joornaalada iyo keydadka hore iyo nidaamyada dib-u-eegista asaagga ayaa si otomaatig ah u tilmaami kara in tarjumaadaha la heli karo. Macluumaadka noocan oo kale ah wuxuu kaloo gacan ka geysan karaa dhisidda xog-ururin loo isticmaali karo in lagu tababaro hababka barashada mashiinka ee tarjumaadda luqadaha yaryar ee dijitaalka ah
Waxaa jira wax weyn qalab waayo, tarjumaadaha iskaashiga ah ee ku-xirnaanta barnaamijka. Aalado isku mid ah oo loogu talagalay maqaallada sayniska ayaa xitaa ka caawin badan leh: turjumidda maqaalka si fiican ayaa looga baahan yahay aqoonta laba luqadood iyo mawduuca; isku dhafkan ayaa ka fudud in lagu gaaro koox isla markaana tarjumaadda ayaa ka xiiso badan. Tarjumaadaha otomaatiga ah waxay bixin karaan qoritaankii ugu horreeyay waxayna keydin karaan shaqooyin badan.
Haddii aan go'aansan karno qodobbada ugu qiimaha badan ee la tarjumay taas oo kordhin karta dhiirigelinta aasaaska sayniska (qaran) si ay u maal-galiso tarjumaaddooda. Iyadoo la adeegsanayo saldhig aqooneed ee Wikidata waan awoodnay hagaajinta raadinta suugaanta la qalab luqado badan ku hadla, sidaas oo kale maqaallo khuseeya oo ku qoran luqado kale ayaa laga helaa. Intaa waxaa sii dheer waxaan sameyn karnaa macdanta qoraalka oo ku hadla luqado badan iyo kuwa aan ku hadlin sharraxaadda afkooda hooyo ee ereyada adag.
Halkii laga qadarin lahaa, tarjumaadaha mararka qaarkood xitaa waxay u horseedaan ciqaab. Google waxay si kama 'ah u ciqaabtaa dadka tarjumay ereyada muhiimka ah maxaa yeelay barnaamijkooda wuxuu u arkaa mid ah ereyga sirta ah ee muhiimka ah, halka maqaallada la tarjumay inta badan loo arko inay yihiin xatooyo. Waxaan u baahanahay inaan ka hadalno dhibaatooyinka noocan oo kale ah oo aan bedelno aaladaha iyo sharciyada noocaas ah si saynisyahannada tarjumaya qoraalladooda loogu abaal-mariyo.
Ingiriisiga oo ah luqad guud ayaa ka dhigtay isgaarsiinta adduunka sayniska dhexdiisa mid fudud. Si kastaba ha noqotee, tani waxay ka dhigtay isgaarsiinta jaaliyadaha aan Ingiriisiga ahayn. Dadka ku hadla Afka Ingriiska way fududahay in si xad dhaaf ah loo qiyaaso inta qof ee ku hadasha Ingiriisiga maxaa yeelay waxaan inta badan la macaamilnaa ajaanibta ku hadasha Ingiriisiga. Waxaa loo maleynayaa in qiyaastii hal bilyan oo qof ay ku hadlaan Ingiriisiga. Taasi waxay ka dhigan tahay in toddobo bilyan oo qof aysan sameynin. Tusaale ahaan, adeegyo badan oo xagga cimilada ah oo laga helo Global South dad aan badnayn ayaa yaqaan Ingiriisiga, laakiin waxay aad u isticmaalaan warbixinnada hagista ee la tarjumay ee Ururka Saadaasha Hawada Adduunka (WMO). WMO ahaan, iyada oo ah urur xubin ka ah adeegyada cimilada, halkaas oo adeeg kasta oo cimiladu ay leedahay hal cod, tarjumaadda dhammaan warbixinnada hagitaankeeda ee luqado badan ayaa ah mudnaanta.
Dadka aan Ingiriiska ku hadlin ama kuwa ku hadla luqadaha badan, qaaradaha Afrika (iyo kuwa aan Afrikaanka ahayn), waxay uga qayb geli karaan sayniska sinnaan siman iyagoo leh nidaam la isku halleyn karo halkaasoo shaqada sayniska ee ku qoran luqadda aan Ingiriisiga ahayn la aqbalo loona turjumo Ingiriisiga (ama wixii kale ee kale) luuqad) iyo taa lidkeed. Caqabadaha luqadeed waa inaysan lumin tayada sayniska.
Maqaallo saynis ah oo la tarjumay ayaa sayniska u furaya dadka caadiga ah, kuwa jecel sayniska, u dhaqdhaqaaqayaasha, la taliyayaasha, tababarayaasha, la taliyayaasha, naqshadaha, dhakhaatiirta, saxafiyiinta, qorsheeyeyaasha, maamulayaasha, farsamayaqaanada iyo saynisyahannada. Caqabada noocan oo kale ah ee kaqeybgalka sayniska ayaa si gaar ah muhiim ugu ah mowduucyada sida isbedelka cimilada, deegaanka, beeraha iyo caafimaadka. Beddelka aqoonta ee fudud ayaa labada dhinacba u mara: dadka ka faa’iideysanaya aqoonta sayniska iyo dadka aqoonta u leh cilmiga saynisku waa inay ogaadaan. Tarjumaaduhu waxay caawiyaan sayniska iyo bulshada labadaba. Waxay caawiyaan hal-abuurnimada waxayna wax ka qabtaan caqabadaha waaweyn ee adduunka ee dhinacyada isbeddelka cimilada, beeraha iyo caafimaadka.
Maqaallada sayniska ee la tarjumay waxay dardar geliyaan horumarka cilmiga iyada oo la adeegsanayo aqoon dheeri ah lagana fogaanayo shaqada laba-laabashada ah. Waxay markaa hagaajinayaan tayada iyo hufnaanta sayniska. Tarjumaaduhu way horumari karaan shaacinta dadweynaha, kaqeybgal cilmiyeed iyo aqrinta sayniska. Soo saarida maqaallo saynis ah oo la tarjumay ayaa sidoo kale abuuraya xog uruurin tabobar ah oo lagu hagaajinayo tarjumaadaha otomaatiga ah, kuwaas oo luqadaha badankood wali maqan.
Markaad akhriday illaa hadda waxaad u badan tahay inaad xiisaynayso tarjumaadaha iyo sayniska. Nagu soo biir. Noo qor waqti kasta: waxaan haynaa 2-wicitaanno toddobaadle ah iyo liiska boostada. Ka tag faallo hoose. Ku dar aqoontaada iyo fikradahaaga noo Wiki. Qor boostada blog si aad u bilowdo dood. Ku soo biir warbaahinta bulshada or ku dar balooggan akhristaha RSS. Ku faafi fariinta in Tarjumida Sayniska ay jirto qofkasta oo xiisaynaya sidoo kale.
Asal ahaan waa la daabacay blog.translatescience.org/launch-of-translate-science/
Categories:	ogeysiisyadaiskaashiKala Duwanaanta LuqaddaIsgaarsiinta Sayniska
Tags: Tarjun SaynistarjumaadaCilmiga yaa leh